बिश्व साइकल यात्री पुस्कर शाह भन्छन् 'अहिले नेपालीलाई क्रिकेट रंङ्गशाला भन्दा भन्दा सिटामोलको आबश्यक छ '
काठमाडौं- धुर्मुस सुन्तली रंङ्गशाला यतिबेला चरम बिवादमा रहेको छ । रंङ्गशालाका बिषयमा पक्ष र बिपक्षमा बोल्ने व्यक्तिहरु दिनप्रतिदिन बढीरहेका बेलामा यतिबेला बिश्व साइकल यात्री पुस्कर शाह पनि रंङ्गशाला अब चिस्यान केन्द्र बन्नु पर्छ भनेर आवाज
हेर्नुहोस् जंगली बँदेल संग ३० मिनेट ल डेर बाँचे ,५५ वर्षको उमेरमा पनि बँदेललाई पछारे ! यस्तो छ अवस्था(भिडियो)
कैलाली-कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिकाको चेतना सामुदायिक बनमा सोहि ठाउँका ५६ बर्षिय छबि लाल बलामी मगर लाई जंगली बदेलले आ क्रमण गरेको छ । छबिलाल सोहि चेतना सामुदायिक बनको कार्यसमिति सदस्य सदस्य समेत हुन । जंगलमा
'कान्छी'सीरियलकी आमा रमा थपलिया आईन मिडियामा, कन्चनको बारेमा यसो भनिन् हेर्नुहोस भिडियो
काठमाडौं । नेपाली टेलिचलचित्र , म्युजिक भिडियो तथा चलचित्रमा आमाको रुपमा रमा थपलिया दर्शक माझ लोकप्रिय छिन् । विशेष गरि हाँस्यटेलिचलचित्र 'हिजो आजका कुरा' ले उनलाई कलाकारिता क्षेत्रमा स्थापित गराएको हो। रमा थपलियाको १३ वर्षको
पोखरा महोत्सवमा रचना रिमालले गीत गाँउदा युवाहरुको हुटिगं (हेर्नुहोस भिडियो)
पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा निकै चर्चा कमाइरहेकी चर्चित गायिका हुन् रचना रिमाल । नेपाल आइडल सिजन ३ बाट चर्चामा आएकी गायिकाको रुपमा उनी निकै चर्चित छिन् । उनी हिजो पहिल्लो पटक पोखरा लेखनाथ महोत्सबमा आएकि थिइन्
सनिसार र हातौका पौजाले हिट भएपछी गायक मिडियामा, दुखका दिन सम्झेर भाबुक भए
काठमाडौं । पछिल्लो समयका लोकप्रिय एवम् चर्चित गायक हुन् कुशल बेलबासे । बजारमा थोरै गीत संगीत लिएर आउने तर जीवन्त गीतसंगीत दर्शकलाई पस्किने गायकको सुचीमा समेत पर्छन् कुशल । लकडाउन अगाडि देश विदेशका हरेक कार्यक्रममा
गायिका सहिमा श्रेष्ठ र बिक्रम रानाको स्वरमा रहेको गीत ‘मोटर सरर’को भिडियो रिलीज भएको छ । अमर वन्तुको शब्द रचना रहेको यस गीतमा राजनराज सिवाकोटीको संगीत रहेको छ । सुव्रतराज आचार्यको निर्देशनमा बनेको भिडियोमा दुर्गेश
काठमाडौं- माजिक सञ्जालमा भाइरल भएकी चियावाली भनेर चिनिएकी श्रृष्टिको घर परिवार कस्तो होला रु भन्ने सबैलाई लागेको थियो । उनी विहान ३ वजे नै उठेर आफ्नो सानो छोरीलाई पिठ्युमा बोकेर काम गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको
अनमोल केसीसंग फिल्म ’पारस’ मा अभिनय गर्ने चर्चामा रहेकी आज्ञा निराजको प्रेममा !
ब्लड क्यान्सर भएपछि अस्पतालबाट रुँदै सहयोगको याचना गरिन् नानुले उपचार गर्दा भएभरको सम्पती सकिएपछि जीबन र मरणको दोषाधमा
चितवन- चितवनकी नानु गिरी अहिले जीबनकै अफ्ठ्यारो दुखद मोडमा पुगेकी छन् । अझै भनौ उनी जीवन र मरणको दोषाधमा पुगेकी छन् । जीब सामान्य तरिकाले चलिरहेका बेला उनी एक्कासी ढलिन् । उनी एक्कासी ढलेपछि उपचारका
देउडा गीत "हे सुवा"को भिडियोमा पश्चिमेली कलाकार चक्र बम र मिना शाहीको दमदार अभिनय
काठमाडौँ। गायक संगीतकार संगीत संयोजक दीपकराज बिश्वकर्माको संगीत तथा आवाजमा पश्चिमेली टिपिकल गीत (हे सुवा) को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । सांगीतिक क्षेत्रमा दिपकराज बिश्वकर्मा एक चिर परिचित नाम हो। उनि द्वारा संगीत बद्ध
सुरेनको 'टाढा नहुनु है'मा विवश र अन्जु
काठमाडौं - गायक सुरेन लामाको स्वरमा नयाँ आधुनिक गीत टाढा नहुनु है...बजारमा आएको छ । गीत निकै कर्णप्रिय बनेको छ । यो गीतको भिडियोलाई चाँगुनारायण इन्टरटेनमेन्ट प्रालिबाट रिलिज गरिएको छ ।यो गीतमा अर्जुन पोखरेलको संगीत